स्वास्थ्य पेजस्वास्थ्य डायरी : गर्भवतीको जागिर यात्रा - स्वास्थ्य पेज स्वास्थ्य डायरी : गर्भवतीको जागिर यात्रा - स्वास्थ्य पेज
स्वास्थ्य डायरी : गर्भवतीको जागिर यात्रा
झमझम पानी परेको त्यो दिन मलाई घरबाट अलिक छिटो गरी बाहिर निस्कनुपर्ने थियो । रोजगारीको लागि फोनबाट संवाद गरेकी थिएँ । मीठो स्वर अनि मेरो बायोडाटा सुनेर सम्पूर्ण योग्यताका कागजातसहित भेट गर्न बोलाइएको थियो । पानीलाई छाताले छल्दै घरबाट निस्कें । बस स्टपमा पुगेपछि भिजेको छातालाई सगेलेर ब्यागमा राख्दै थिएँ, पानी झन दर्किएर आयो । बस स्टपमा ओत लाग्नेहरुको भीड बाक्लिदै गयो । सबै अलि अलि भिजेका देखिन्थे । यत्तिकैमा बस हल्ला गर्दै आयो ।
गाडी रोक्नासाथ एक हुल मानिस तँछाड मछाड गर्दै गाडीतर्फ दौडिए । गाडीको सहचालक भीड मिलाउँदै भन्दै थिए, ‘पछाडि पुरै खाली छ, अलि सरेर मिलेर बस्नुस् त । आउनुस्, आउनुस् बहिनी, अर्को बस पनि यस्तै हो । यहाँ नजिकै झर्ने धेरै हुनुहुन्छ ।”
नभन्दै मानिसको हुल गाडी भित्र ईंटा मिलेझैं मिल्न थाल्यो । मेरो मनलाई पनि त हतार थियो । जागिर पाउनकै लागि त समयमा आउन नसक्नेले पछि कसरी समय मिलाउनुहुन्छ भनेर म माथि प्रश्न आउने हो कि ? भन्ने लागिरहेको थियो । त्यसैले पनि सहचालकको बोलावटलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै खुर्रर दगुर्दै गाडीको दोश्रो खुड्किलोसम्म पुगें ।
कोही बाहिर भिजेका, कोही मन भिजाएका व्यक्तिहरुको त्यो हुलमा आफूलाई बचाएर राख्न निकै गाह्रो महशुस भइरहेको थियो । खचाखच भरिएको गाडीमा सायद प्यासेन्जर मिलाएर राख्न होला, चालकले बिच बिचमा अलिक बेसरी ब्रेक लगाउँथे । सोंच्छु भीडभाडलाई मिलाएर राख्न चालक, सहचालकले जति कसले पो जानेको होला रु हाम्रा नेताहरुले जनतालाई यस्तै मिलाएर राख्न सिके हुने नि । यिनीहरु आफू आफू पनि एक आपसमा मिलेर बस्न यिनैबाट सिके हुन्थ्यो ।
सबै राजनितीक दलले आफ्नो मात्रै पोल्टोको भाग हेर्दा देश विकास र हामी सर्वसाधारणका लागि सोच्ने फुर्सदै पाएनन् । हामी सधै यिनीहरुको रमिते बनिरहने हो कि रु अनि यिनको परिचय हामीले बनाईदिएको होईन र ? किन सक्दैनौं हामी यिनको परिचय कार्ड खोस्न ? यस्तै प्रश्न आफैले आफैलाई गर्दै थिएँ, मेरो झर्ने स्टेशन पो आएछ ।
बाहिर पानी परिसकेर पारिलो घामले घमाइलो बनाए पनि मेरो मन अघिको मुसलधारे पानीले दिन धुम्मिएजस्तै धुम्मिएको थियो । म आज पास हुन्छु या फेल रु मेरो सर्टिफिकेट बिक्छन् कि बिक्दैनन् ? मलाई कस्तो प्रश्न सोधिने होला ? समय कति दिनुपर्ने होला ? फेरि मेरो भनसुन गरिदिने मान्छे पनि त छैन, म कसरी छनौटमा परुँला ?
म गन्तव्यमा पुगीसकेकी थिएँ । बाहिर उभिएका पाले दाइले प्रश्न गरे, ‘बहिनी कसलाई भेट्न आउनु भाको ? के काम छ रु’ म हाकिमलाई भेट्न आएको भन्दै कार्यालयभित्र छिरें । बाहिर राखिएको नेम प्लेट हेरेर हाकिमको कोठाभित्र दाखिल भएँ । उनीसँगै अरु तीन जना व्यक्ति थिए, सायद सहकर्मीहरु होलान् । अनुहार रातो बनाउँदै भित्र छिरेकी मलाई तीनै जनाले तलदेखि माथिसम्म नियालेर हेरेको मेसो पाइहालें । उकुसमुकुस भएँ । त्यसो त जागिर पाउने हो कि होइन भन्ने डर, त्यसमा पनि उनीहरुको नजर मलाई त्यत्ति चित्त बुझेको थिएन ।
बस्ने अनुमति लिंदै नजिकैको सोफामा बसें । र, मेरो परिचयसहित फोनमा कुरा भएको व्यक्ति आफू भएको जानकारी गराएँ । ‘खोई एकचोटि हेरौं न त डकुमेण्ट” हाकिमको इच्छा बुझेपछि क्लियर व्यागमा राखिएका निकै क्लिन मेरा सर्टिफिकेट र मेरो बायोडाटा पेश गरें ।
सर्टिफिकेटका पाना फर्काउँदै घरीघरी उनको नजर म माथि परिरहन्थ्यो । त्यत्तिकैमा आफ्नो नजिकैको एकजनालाई सुटुक्क कानेखुसी गरे, ‘मान्छे त ट्यालेण्ट नै हो तर वहाँको अहिलेको अवस्थामा जागीर दिंदा भोलि हामीलाई काममा बाधा हुन्छ ।’ मैले भेउ पाइसकेकी थिएँ । खुकुलो कुर्ता सलवारमा सपक्क छोपिने गरी ओडेको चुनरीले पनि छेकेन मेरो बाध्यता । अनि मलाई लुकाउनु पनि त थिएन । मैले अनुरोध गरें, ‘जागिर पाएँ भने म आफ्नो व्यवस्थापन सजिलै गर्न सक्छु ।’
अनि त्यसैमाथि कोखैमा बसेका भद्र भलाद्मी व्यक्तिले सोधे, ‘बहिनी यस्तो बेलामा नि तपाईं काम खोज्न हिँड्नुभएको रु बरु यस्तो बेलामा त भएको काम पनि छाडेर आराम गर्नुपर्छ, खानपीनमा जोड दिनुपर्छ । जागीर गरेर कसरी सम्भव हुन्छ तपाईंलाई रु’
मलाई यो सब थाहा नभएको कहाँ हो र रु साथीहरु सबै आ–आफ्नो काममा व्यस्त छन् । उनीहरुको अगाडि पनि मैले केही गर्नु जरुरी छ । फेरि त्यति धेरै पढेकी बुहारी ल्याएर के काम रु खोई त पढेको काम लागेको रु भन्ने समाजको लान्छना । केही गर्न नसक्ने तिमी रु साथीहरुका श्रीमती सबै जागिरे छन्, तिमी त सधंै घरमै बसेर नथाक्ने श्रीमान्को चित्त दुखाई । अनि पल्ला घरकी बुहारी बिहानै काम सकेर स्कुटर चलाएर अफिस जान्छिन् । घरको काम नि भ्याउने, अफिस पनि भ्याउने कस्तो बुहारी पाएका, कति भाग्यमानी सासु ससुरा । हाम्रो त रहर मात्रै भयो । सासुको दिनहुँको गनगन झल्यास्स मनमा आयो ।
झनक्क उठेको रिसलाई काबुमा राख्दै नबुझेजस्तो गरी भनें, ‘मेरो पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको लालन पालनको लागि त झन मलाई आवश्यक छ जागिर । म सक्छु सबै मिलाउन । मलाई आफूमाथि विश्वास छ ।’ यति सुनेपछि ‘हुन्छ बहिनीलाई खबर गरौंला’ भन्ने जवाफ आयो । मैले त्यहाँको कर्मचारी हुने आशा मारी हवस् भन्दै निस्कें ।
निकै भोक लागेको थियो । विहान मनमा अलिक हतार भएकोले खाना रुचेको थिएन । घरमा गएर पनि त आफै बनाएर खानुपर्छ, बरु खाजा खाएर जान्छु भन्दै नजिकै रहेको खाजा घरमा पसें । दिनभर पानी परेकोले होला, त्यति भीडभाड थिएन । मैले खाजा र कफी अर्डर गरें । यत्तिकैमा नजिकै कुन अफिस रहेछ कुन्नी, त्यहाँका कर्मचारीहरु खाजा खान भनी आएर मेरो नजिकैको टेबलमा बसेर चर्को चर्को स्वरमा गफ गर्न लागे ।
हेर न, अस्ति कर्मचारी कम भयो भनेर एचआरसँग मागेको, एउटी गर्वभती महिलालाई पठाएछ । अब विदा बस्दिने होला । यस्ता कर्मचारीबाट प्रगति कसरी गर्न सकिन्छ रु अर्कोले यत्तिकैमा थपे, यो केटी मान्छेहरु त कार्यालयमा नपठाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । फेरि आरक्षण छ, आजकाल धेरै नै आउने गरेका छन् । विहे नभएको केटी मान्छे आयो भने काम सिक्न नपाउँदै विहे गरेर अर्को ठाउँमा जाने, सरुवा भइदिने अनि भर्खर विहे भएकाहरु फेरि कहिले ३ महिना विदा बसीदिने हुन् भन्ने डर । बरु बच्चा हुर्किएका पठाए हुन्थ्यो भन्दै महिला कर्मचारीलाई मजाकको पात्र बनाउँदै गललल्ल हाँसे ।
मलाई असह्य भयो तर त्यसको प्रतिकार गर्न मसँग सामथ्र्य थिएन । यत्तिकैमा मेरो खाजा आयो । उता गफको प्रसंग मोडियो । त्यो होटल उनीहरुकै स्टाफमध्ये एकजना श्याम भन्नेको रहेछ । श्याम सरले कति प्रगति गर्नु भाछ । अफिस अनि व्यावसाय दुवै भ्याउनु भाछ । निकै टाठो मान्छे वहां । हुन त गर्न पनि पर्यो, हाम्रो आम्दानीले मात्रै परिवार धान्न कहाँ सकिन्छ र । दाम अनुसारको काम त हो नि, बाहिर अरु नगरे त परिवार पाल्नै सकिंदैन । यत्तिकैमा अर्कोले थपे, विहान अफिस आएपछि वहाँ धेरैजसो बाहिरै हुनुहुन्छ । अफिस पनि सजिलो छ वहाँको, असिस्टेण्ट स्टाफ एउटी राम्री महिला छिन्, उनले सबै काम सहज तरीकाले समयमै सकाउँछिन् । अफिसको खासै टेन्सन गर्नुपर्दैन । अर्कोले थपे, ए राम्री पनि छिन् रु फेरि श्याम सरलाई व्यावसाय विर्सेर अफिसमै बस्न मन लाग्ने पो हो कि रु सबैजना खित्का छाडेर हाँसे, केही खुसीयाली मनाए जस्तो गरी ।
महिला कर्मचारीले कामको सम्पूर्ण बोझ उठाईदिएर पुरुष साथीहरुले व्यापार धान्न हुने रु उनीहरुले अफिसको काम भन्दा बाहिरको काम गर्दा टाठोबाठो हुने रु तर प्रकृतिले दिएको भूमिका निभाउने क्रममा विदा बस्दा महिला कर्मचारी काम नलाग्ने बनिदिने रु
महिलाको कामको भन्दा पनि सुन्दरताको मूल्याङ्कन हुने रु महिलाहरुमा काम प्रतिको लगाव बढी हुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारीमा कहिल्यै चुक्दैनन् । तर पनि उनीहरुको मूल्याङ्कन रुप रङ्गसँग मात्रै किन गरिन्छ रु उनको परिचय उनको योग्यतालाई किन मजाक बनाईन्छ समाजमा रु यी यस्ता भलाद्मी भनिएका समाजका पढेलेखेका भनाउँदाहरुको त सोंचाई यति निकृष्ट सोच हुन्छ भने आममानिसको हेराईलाई कसरी बुझ्ने रु मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो, तपाईंकी आमा कति राम्री छिन् रु के आमाको रुपसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ उनको ममता ? विवेकको घैंटोमा स्वार्थको ताला कहिलेसम्म लगाउने हो ?
हामी विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौं । विभिन्न खाले विभेदमध्ये लैंगिक विभेद एउटा जटिल विभेद हो । हाम्रो समाजलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने पुरुष र महिला बिचको ठूलो विभेदको खाडल अझै पनि यथावत नै देखिन्छ । लिंगका आधारमा हुने हिंसाको चपेटामा सिंगो मुलुक परिरहेको छ ।
यी सब कुराले मलाई असह्य भएको थियो । म भित्रका विरोधहरु पनि जमेर पत्थर बनिसकेका थिए । आफ्नो आवेगलाई सम्हाल्दै निस्कें । अब त साँझ पनि पर्न लागिसक्यो, बस चढेर जानु छ । फेरि घरमा गएर साँझको भान्सा सुरु गर्नु छ । घरको बुहार्तन अनि समाजको कुदृष्टिका बिच केही गर्नु नै छ । बस पनि आइहाल्यो, साँझ परेकोले होला भीडभाड थिएन । खाली सीटमा बसेर घर आईपुगें । हतार हतार गरी फ्रेस भएर भान्सामा छिरें । खाना खाईवरी सबैजना टेलिभिजन हेर्न थाले । म भने जुठो भाँडा माझ्न थालें । आज छिटै विस्तारमा पल्टिएँ । दिनभरका घटनाक्रम आँखाभरी ऐनामा जस्तो छर्लङ्ग आईरहे । आँखा चिम्लिएर मनमा आफैसँग गन्थन मन्थन गर्दागर्दै कति बेला निदाएछु, पत्तै भएन ।
२८ फाल्गुन २०७८, शनिबार प्रकाशित